Ihe 5 I Kwesịrị Ịma Banyere Nna-ada Nwa Egwu | Fred Astaire
Fred Astaire Dance Studios - Ọhụrụ pụrụiche ụmụ akwụkwọ
Nwa akwụkwọ Nbanye
Nwa Mmụta Ọhụrụ
Malite Ịgba egwu!
Uru Ịgba egwu
4 ogidi egwu
Ajụjụ nkuzi Dance
Ihe ọmụmụ agbamakwụkwọ
Mmụta ụmụaka & ndị na -eto eto
Mmụta Para Dance
Ego ndị agha
Gịnị kpatara FADS?
Ndị otu ịgba egwu int'l
Akụkọ gbasara FADS
Maazi Fred Astaire
Akụkọ ụmụ akwụkwọ
Akụkọ & Pịa
Akụrụngwa maka Mgbasa Ozi
Nde nkpuchi nkpuchi nde
Ihe Omume Virtual
Asọmpi Mba Nile
Blog & Ọha
Blog ịgba egwu
Platform Mmụta n'ịntanetị
Ama Mmụta Mmụta n'ịntanetị
Mmụta gụgharia onwe
Sistemụ Trophy dị n'ịntanetị
Ihe 5 I Kwesịrị Ịma Banyere Ịgba egwu Nna-nwa-nwanyi
Ịgba egwu nna-nwa bụ nnukwu ihe n'ọtụtụ agbamakwụkwọ. Ọ bụ oge nwanyị a na -alụ ọhụrụ na -asọpụrụ nna ha, ma na -anọchite anya ịhụnanya na ekele ha nwere maka nna ma ọ bụ nna na ndụ ha. Ọ bụrụ na ị kpebie itinye egwu nwa nna na agbamakwụkwọ nke gị, ọ nwere ike ị gaghị ama ebe ị ga-amalite. Gụọ n'ihu maka ihe 5 ị kwesịrị ịma gbasara ịgba egwu.
Akụkọ dị mkpirikpi nke ịgba egwu nna-nwa nwanyị
Dị ka ọtụtụ omenala agbamakwụkwọ, ịgba egwu nna na-abịa site na akụkọ ihe mere eme nke nna anyị ochie wee jiri bụrụ ihe ikpeazụ nna nna nwanyị na-alụ ọhụrụ chọrọ tupu di ya aghọọ nwoke kacha mkpa na ndụ nwanyị. Ugbu a, ịgba egwu anaghị enwe otu ihe ọ pụtara, kama nke ahụ, ọ bụ ihe nnọchianya nke ịhụnanya nna na nwa ya nwanyị nwere n'ebe ibe ya nọ.
Kedu mgbe ị na-agba egwu nna-nwa nwanyị?
Ọtụtụ ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ na-ekpebi ka nna na nwa nwanyị gbaa egwu ozugbo ha na nwunye ọhụrụ ha gbaa egwu. Mana ọ bụrụ na ịchọghị ịgba egwu mgbe oge ahụ gasịchara, enwere oge ndị ọzọ dị mma ịpịkọta ya dị ka mgbe tost na tupu ịkpụ achicha ahụ.
Kedu egwu ị kwesịrị ịhọpụta?
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ na -ahọrọ abụ sitere n'obi, ịhụnanya, ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ na -ahọrọ abụ na -atọ ụtọ ma na -ewetara ndị ọbịa ntakịrị ọchị. N'ikpeazụ ọ dị gị n'aka. Yabụ ma ị họrọ ihe ngwa ngwa ma ọ bụ nwayọ, o kwesịrị igosipụta mmekọrịta gị.
Ekwesịrị ịhazi egwu ahụ?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgba egwu na egwu ngwa ngwa, nke na -ewuli elu, ịhazi ihe a na -eme kwa ụbọchị nwere ike ịbụ echiche na -atọ ụtọ na nke a na -atụghị anya ya. Mana ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịnọrọ nwayọ, ịgba egwu ọdịnala, ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa. Kama, ị nwere ike were nkuzi ịgba egwu ole na ole kama na -eme tupu ihe dị adị.
Ị nwere ike ịgụnye nne na nna gị?
Omenala bụ otu ihe, mana egwu a bụ nke gị! Ị nwere nnwere onwe ịhọrọ onye ọ bụla ị ga -achọ ịgba egwu, ị nwekwara ike ịgbanwere ndị mmekọ (ma ọ bụ egwu) mgbe ọkara. Ọ bụrụ na enwere mmadụ ole na ole ị ga -achọ ịsọpụrụ n'ịgba egwu, ha niile nwere ike ịbịanye aka n'otu oge ịkekọrịta oge ahụ.
Ogologo oge ole ka ịgba egwu ahụ na -adịru?
Ọchịchị dị mma bụ na ịgba egwu ga-ewe ihe dị ka nkeji 3-4, ma ọ bụ ọ bụrụhaala na egwu a na-adị. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị na -akwado ịkpọ ụdị egwu dị mkpụmkpụ karịa nke zuru ezu iji mee ka ndị ọbịa gị lebara ya anya.
Na Fred Astaire Dance Studios, anyị nwere ike ịnye gị na ndị ọzọ nọ na mmemme ịgba egwu nke agbamakwụkwọ gị iji mee ka ụbọchị gị bụrụ ọpụrụiche. Ma ị nwere mmasị na usoro ihe omume choreographed ma ọ bụ na ịchọrọ obere omume tupu oge ngosi, anyị bịara inyere aka. Kpọtụrụ anyị taa wee chọpụta ihe ndị ọzọ!
Nweta Onyinye Intro
Isi ụlọ ọrụ ụwa
Usoro ọrụ nwebiisinka © 2021 Fred Astaire Dance Studios
Nyere anyị aka ịchọta ụlọ nka dị gị nso! Ebe anyị kacha dịrị nso ga -egosipụta na ibe nsonaazụ ọchụchọ.
* na -egosi ubi achọrọ
Chọọ Ugbu a!